Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Venice izao dia mandoa vola amin'ny mpizahatany
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Venisika nandoa vola i Venise nanao fiverenana
Ny turnstiles mandoa vola any Venise dia miverina amin'ny fidiran'ny mpizahatany ao an-tanàna. Ny areti-mifindra dia tsy nanimba ny vonjy taitra izay efa toa tsy voavaha tao Venice, Italia - ny fizahan-tany loatra. Ny fihoaran'ny mpizahatany izay, na eo aza ny tsy fisian'ny onja avy any ivelany, dia nampiavaka ity fahavaratra Venetian ity ihany koa.
Miandrandra fidiran'ny mpizahatany amin'ny taona ho avy i Venise, hitondra ny turnstile hiverina ka mila mandoa vola ny mpizahatany hiditra ao an-tanàna.
Natao tamin'ny taona 2018 ny seho turnstile saingy tsy nahomby ary nitabataba ny mponina.
Ny turnstiles vaovao dia hanana mpamaky optika izay hananan'ny mponina, ny mpianatra ary ny mpiasa lakile virtoaly amin'ny findainy hahazoana fidirana malalaka.
Fanapahan-kevitra izay navela nihantona nandritra ny fotoana elaela izao dia hampiharina hifehezana ny isan'ny mpizahatany mitsidika an'i Venise.
Ben'ny tanàna Venise Luigi Brugnaro
Efa amin'ny taona ho avy, amin'ny 2022, ny renivohitra Venetiana hametraka andian-turnstère feno mpamaky optika eny an-dalambe, izay ho haitao avo lenta kokoa noho ny vavahady itsapana azy amin'ny taona 2018, izay ireo ihany no namandrika hitsidika ny toerana haleha na hijanona ao trano fidirana afaka miditra.
Hisy ihany koa ny vidim-pidirana 10 euro aloa. Tsy afa-mivoaka amin'ny tolam-bahoaka ny mponina, ny mpandeha ary ny sokajy hafa. Ny tanjona dia ny hisorohana ny fahamaroan'ny mpizahatany Mbola antenaina kokoa aza ny lahatsoratra COVID.
"Hanapa-kevitra izahay mifototra amin'ny teknolojia, [ary] hifidy izay hampidirina azy ireo izahay," hoy ny fitantanana notarihin'ny Ben'ny tanànan'i Venise Luigi Brugnaro, ary nanampy hoe, "Tamin'ny volana Jona, ny fanehoana fahalianana amin'ny fisafidianana ireo vavahady tsara indrindra, misy efatra orinasa vonona hanolotra ny tetikasany. ”
Hanomboka amin'ny volana septambra ny fitsapana voalohany. Hotanterahina ao amin'ny nosy Tronchetto izy ireo, ny fototry ny foiben'ny polisy ao an-toerana sy ny toerana anaovana ny efitrano fanaraha-maso an-tsaina.
Ny mponina, ny mpiasa ary ny mpianatra izay mandeha any an-tanàna isan'andro dia afaka miditra noho ny fanalahidy virtoaly amin'ny findainy. Mandritra izany fotoana izany, ny mpizahatany dia tsy maintsy mamandrika toerana sisa tavela mialoha, avy eo maka scan karazan-tapakila hidirana ao amin'ny iray amin'ireo teboka fidirana ireo.
Tamin'ny volana Jona, nanambara ny minisitry ny fahasalamana italiana Roberto Speranza fa avelan'i Italia hiditra ao amin'ny firenena ny firenena amerikana araka ny takiana mitovy amin'ny Green Certificate an'ny EU. Midika izany fa ireo mpitsangatsangana amerikana izay afaka mampiseho porofon'ny vaksiny, taratasy fanamarinana fanarenana avy amin'ny COVID-19, na fanadinana PCR- na fanadinana antigen haingana natao 48 ora taorian'ny nahatongavany dia afaka mandeha any amin'ny firenena Mediteraneana nefa tsy mila quarantine rehefa tonga.
24 Aogositra 2021 amin'ny 06:34
OMG..Venice no Disneyland vaovao !!!